Izikhungo Unit Operators, Amafutha, negesi, Futhi Imayini Job Description / Isibopho Sample Futhi Izabelo - JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Izikhungo Unit Operators, Amafutha, negesi, Futhi Imayini Job Description / Isibopho Sample Futhi Izabelo
Izikhungo Unit Operators, Amafutha, negesi, Futhi Imayini Job Description / Isibopho Sample Futhi Izabelo
UJakobe Juni 28, 2016 Ukukhangisa 3 Amazwana 542 Ukubukwa
imishini Umsebenzi ukuthuthukisa ukugeleza amafutha ekwenzeni imithombo noma ukususa ipayipi esiveza, izindlu, imishini, noma kuphazamiseka sihluke ukuhlola imithombo. Kungenzeka futhi akhiphe izinkampani emadanisekako ukuhlola search imisebenzi. Iqukethe Ochwepheshe ukudoba-isisetshenziswa.
Umsebenzi Amakhono Ukufaneleka
Cela amacebiso kwabanye baqoqe mayelana komsele noma isofthiwe izitayela noma izimo Borehole e imithombo.
Truck ukuthi kwaba ukukhiqiza imikhiqizo -mounted kumasayithi kahle.
Sebenzisa amandla-uphathe amayunithi ungene wellheads.
Handtools kokuba, esetshenziswa Twine izintambo ngokusebenzisa uDerrick izipilingi.
Yenza ithumela ukuthi amanzi pass, uwoyela, noma uketshezi ezahlukene ngokusebenzisa imithombo balahle udaka noma eyengeziwe izinto ekuvimbeleni freeflow uwoyela sika.
imithombo eduze naseduze akukho-isikhathi eside ukusetshenziswa.
izinguquko Umsebenzi ukumphakamisa Derricks noma amazinga yokumba.
isenzakalo, izinsiza ezisetshenziswa, noma ukulungiselela imibiko amasevisi nikeza kulindeleke, ngoba izicelo yokukhokha.
Khetha Angling imikhuba noma izinsiza ekuqedeni izithiyo ezifana isibonelo liner, izindlu busted, ekhombisa, noma umsebenzi tube.
Humusha ithuluzi ukufundwa ukusungula ezingeni isimiso sika.
Ulungise futhi ugcine ukufeza nophenyo yezokuphepha izinsiza kanye nemikhiqizo.
Tune in izinjini, zokudla isiyingi, noma imikhiqizo ehlukene ukuthola amabhizinisi okuyiphutha noma angajwayelekile kahle izifo.
Khona manjalo ukuhlola nabasebenza ngokufeza izenzo ezifana ngokwesibonelo burrowing izithiyo emhlabeni bolimi, noma ukuhlela nokujoyina ipayipi, isicelo izinsimbi ukuzivocavoca piping.
Perforate ezisemaceleni noma ngempumelelo casings ka kumbiwa imithombo kokuba amacala kuqhume.
Umsebenzi imikhiqizo ethile ukuqeda obstructions ngekwesekela- ukusika piping ngomsebenzi oluyingozi noma into noma phansi.
Tadisha imithombo unserviceable ukuthola izinyathelo beba kuthathwe ukwandisa kahle izimo.
Indawo uphethwe imishini ku imithombo besebenzisa obstructions.
Izinto ukuthola kahle amazinga izidakamizwa udaliwe noma uzingela ngu ukugcina igagasi umsindo.
Sebenzisa ubuchwepheshe oluhlaza noma imikhuba kuhlanganise ukusetshenziswa tubing ezigoqile, Ukunquma- aphuke wokubacindezela, imishini nendawo, amasu igebe imishini.
Jobe Izinto Udinga
Ukufunda Ulwazi-ukusiqonda okuqukethwe okubhaliwe nemisho emsebenzini wamaphepha ezihambelana.
Active-Ukulalela-Yini abanye abantu abakushoyo Ngokunaka Imininingwane,, kokuba isikhathi ukuba uqaphele imininingwane idalwa, ukubuza imibuzo njengoba elungile, hhayi kokuphazamisa at izikhathi ezingafanele.
Ukukhiqiza-Ibhalwe phansi njengoba afanele nezidingo isixuku ukhuluma ngempumelelo,.
Ukuxhumana-Ukuxoxa nabanye ukwabelana amaqiniso kwamandla.
Arithmetic-Ukusebenzisa maths ukuxazulula izinkinga.
Ubuchwepheshe-Ukusebenzisa iziqondiso yesayensi nezindlela ukulungisa nobunzima.
Criticalthinking-Isebenzisa logic futhi ngacabanga ukuhlonza izinzuzo nokushiyeka komngane izindlela, Imiphumela noma amakhambi esikhundleni yobunzima.
Active-Learning-Ulwazi izinzuzo amaqiniso entsha ngoba problemsolving futhi izinqumo ngasinye yamuva nezesikhathi esizayo.
Ukufunda Izindlela-Ukukhetha nokusebenzisa isiqondiso / imikhuba izifundo futhi izinqubo ezifanele inkinga lapho usukwazi ukudlala kahle noma ibayala izinto ezintsha.
Ihlola-CheckingANDAssessing ukusebenza bezinkampani, nezinye abantu, noma wena ukudala ngcono noma athathe izinyathelo zokulungisa.
Komphakathi Perceptiveness-Ngokuhlale bekhumbula abanye’ ukuthambekela nokuqonda ukuthi kungani enza ngendlela benza.
Dexterity Esishintsha netento ngekwemagugu imisebenzi othersI.
Azithenge-Begging abanye ukuba bathuthukise imiqondo yabo noma ukuziphatha.
Izingxoxo-Ukuthatha abanye ndawonye futhi ngifuna ukuvumelanisa okwahlukile.
Ngokufundisa-Ukufundisa abanye indlela ukuthatha isinyathelo.
Izikhungo Orientation-Ngezenzo bazama ukuthola izindlela ezisiza abantu.
Inxanxathela Problemsolving-Ukuhlukanisa nezindaba esiyinkimbinkimbi ucwaninga ulwazi exhumene uhlole futhi ukukhiqiza ongakhetha futhi zisebenza izindlela.
Operations Research-Ukuhlola izidingo nto futhi ufuna ukwenza umklamo.
Ubuchwepheshe Design-Technology ukusebenza umthengi nokudala noma bakubheka amadivayisi izidingo.
Isisetshenziswa Ukukhethwa-Inquma ngohlobo lomshini bese amathuluzi adingekayo ukuze akhiphe umsebenzi.
Ukufaka-Ukufaka izinhlelo zohlelo, imishini, cabling, noma imishini ukwanelisa izidingo.
izicelo Ifaka ikhodi-Publishing ikhompyutha ekusebenziseni ukuthi baningi.
Ukusebenza Tracking-Ukubona dials, Izikali, noma izinkomba ezengeziwe ukuze uqiniseke kukhona umshini ayisebenzi kahle.
Inqubo kanye Control-Ukusingatha izinqubo izinhlelo noma imikhiqizo.
Isisetshenziswa Isondlo-Buciko isevisi ojwayelekile imikhiqizo nokubona lapho.
Ukuxazulula Ukuthola amaqiniso okusekelwe kuwo amaphutha ukuthi ezisebenzayo futhi kokunquma ukuthi yini ngakho.
Ukubuyisela-Ukubeka onobuhle noma izindlela sisebenzisa imishini ukuthi oyifunayo.
Quality Control Ukuhlaziya-Buciko ukuhlolwa kanye nophenyo kwezimpahla, amasevisi, noma izinqubo ukuhlola ukusebenza noma kakhulu.
Ukwahlulela Decisionmaking-Ecabangela inkululeko izindleko isihlobo nezinto ezinkulu mayelana izinyathelo kungenzeka ukukhetha omunye ofanele kakhulu.
Systems Ukuhlaziywa Ukuthola indlela ushintsho kulungiselelwa, izinqubo, futhi izifo kuzoba nomthelela izinzuzo futhi kanjani indlela kumele isebenze.
izenzo Izindlela Ukuhlolwa-ezilihlukanisayo noma izinkomba ukusebenza isihlobo nezinhloso umshini, izenzo waba isidingo ukwandisa noma ukusebenza lesifanele.
Isikhathi Ukuphathwa-Ukulawula isikhathi siqu futhi abanye’ isikhathi esisodwa.
Ukusebenza kwezinhlaka lwezezimali Resources-Icacisa indlela mali iyaphi Kudingeke ukuthi kusetshenziswe izindlawu banomsebenzi kwenziwe, futhi yokuthengisa mayelana nala izikweletu.
Ukuphathwa Into Izindlela-Ukwamukela nokubona ukusetshenziswa ekahle izikhungo imikhiqizo, futhi izinto zokwakha ezidingekayo ukwenza esithile usebenze.
Ukuphathwa Abasebenzi Resources-Ukusungula ekhuthazayo, futhi eqondisa abantu njengoba basebenza, sokunquma abantu okungcono kakhulu umsebenzi.
Ukuqeqeshwa Ukufaneleka Ulwazi Isidingo
Level Isikole samabanga aphezulu (noma kukaGedaliya noma Senior School kwefrakshini Certificate)
Kuyaphawuleka esingaphansi Diploma School Ephakeme
Ngaphezu kwe 1 yr, kuze kufinyelele eminyakeni emibili futhi kubandakanya,
Jobe Command Amakhono Udinga
Ukuphathwa – 88.03%
Inkinga ukuthola Abanye – 77.45%
Ukuhambisana Komphakathi – 91.56%
Ukuzithiba – 90.97%
ingcindezi Tolerance – 92.16%
nokwethembeka – 96.14%
Ukuqamba – 84.56%
Ukucabanga – 84.75%
Mashi 28, 2019 at 5:19 ntambama
Mashi 31, 2019 at 12:52 ngi
Mashi 31, 2019 at 11:39 ntambama